ဤပေါ်လစီကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဒ်မ M တွင်ဖော်ပြထားသောကုမ္ပဏီများကထုတ်ပြန်သည်။DataNumen"," ငါတို့ "," ကျွန်တော်တို့ကို "သို့မဟုတ်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ") ။ ဤပေါ်လစီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ (ကျွန်ုပ်တို့၏“ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ”) customers ည့်သည်များ၊ ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏အခြားသုံးစွဲသူများ (အတူတကွ“ သင်”) အပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဤပေါ်လစီတွင်အသုံးပြုသောသတ်မှတ်ထားသောဝေါဟာရများကိုအောက်ဖော်ပြပါအပိုင်း (N) တွင်ရှင်းပြထားသည်။
ဤမူဝါဒ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် DataNumen သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်သူဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလျှောက်လွှာအတွက်အောက်ဖော်ပြပါအပိုင်း (M) တွင်ဖော်ပြထားသည်cable DataNumen သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ မေးမြန်းချက်များကိုဖြေကြားနိုင်သည်။
DataNumen အောက်ပါအမှတ်တံဆိပ်အောက်မှာလည်ပတ်: DataNumen.
သင်နှင့်ပုံမှန်ဆက်ဆံမှု (ဥပမာ၊ သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုစီမံသောကာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ) ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးသောတတိယပါတီများမှရရှိသောအခါဥပမာ - အကြွေးပြုခြင်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီများသို့မဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများ။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့လည်ပတ်သောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မှတဆင့်ရရှိနိုင်သောမည်သည့်အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုသင်လည်ပတ်သောအခါသင်၏စက်ပစ္စည်းနှင့်ဘရောင်ဇာသည်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြလိမ့်မည် (ဥပမာ - စက်အမျိုးအစား၊ လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ဘရောင်ဇာအမျိုးအစား၊ ဘရောင်ဇာဆက်တင်များ၊ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားချိန်ညှိချက်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်သည့်နေ့ရက်များနှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်များ) အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ။
သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း / CV ကိုအလုပ်လျှောက်လွှာတင်သောအခါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖန်တီးခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ ဥပမာကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုမှတ်တမ်းများနှင့်သင်၏မှာကြားမှုမှတ်တမ်းအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ: ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားများတွင် -
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အမည် (များ)၊ ကျား၊ မ၊ မွေးဖွားသည့်နေ့၊ နိုင်ငံသား၊ နှင့်ဓာတ်ပုံ။
ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်ကို: ရေကြောင်းလိပ်စာ (ဥပမာ - မူရင်းမီဒီယာနှင့် / သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြန်ပို့ရန်)၊ စostAl လိပ်စာ; တယ်လီဖုန်းနံပါတ်; အီးမေးလိပ်စာ; နှင့်လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်းကိုအသေးစိတ်။
ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်: ငွေတောင်းခံရန်လိပ်စာ; ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်; ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူသို့မဟုတ်စာရင်းကိုင်အမည်၊ ကဒ်သို့မဟုတ်အကောင့်လုံခြုံရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ကဒ် '' မှတရားဝင် '' နေ့စွဲ နှင့်ကဒ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်။
အမြင်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များ ကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ရန်သင်ရွေးချယ်သောမည်သည့်အမြင်နှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုမဆို၊ost ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေအကြောင်း
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောသင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတွင်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းထိခိုက်လွယ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလည်းပါဝင်နိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်တရားဝင်အခြေခံ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းသည်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အောက်ဖော်ပြပါတရား ၀ င်အခြေခံတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ အားထားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်းအားကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည် (ဤဥပဒေရေးရာအခြေခံသည်လုံးဝထုထည်ရှိသောထုတ်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်tary - မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုလိုအပ်သော (သို့) မဖြစ်မနေလိုအပ်သောထုတ်ယူခြင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။
အဆိုပါထုတ်ယူခြင်း appli အားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်cabဥပဒေ
တစ် ဦး ချင်း၏အရေးကြီးသောအကျိုးစီးပွားများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ထုတ်ယူခြင်းသည်လိုအပ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုစီမံခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်တရားဝင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်။ သင်၏အကျိုးစီးပွား၊ အခြေခံအခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ခွင့်များကြောင့်တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
သင်၏အထိခိုက်မခံသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံခြင်း - သင်၏အထိခိုက်မခံသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မကြိုးစားပါ၊
အဆိုပါအပြောင်းအလဲနဲ့ appli ကလိုအပ်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုထားသည်cabဥပဒေ (ဥပမာ - ကျွန်ုပ်တို့၏မတူကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာရန်);
ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းတို့အပါအ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်သည်လိုအပ်သည်။
ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျင့်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်လိုအပ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်
ကျနော်တို့ appli နှင့်အညီရှိသည်cabဥပဒေအရသင်၏အထိခိုက်မခံသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမထုတ်ယူမီသင့်ကြိုတင်ရှင်းလင်းစွာသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည် (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဤဥပဒေရေးရာအခြေခံအားလုံးလုံးလျားလျားဖြစ်သည့်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။tary - မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုလိုအပ်သော (သို့) မဖြစ်မနေလိုအပ်သောထုတ်ယူခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအထိခိုက်မခံသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည် (ဥပမာ - သင့်အားအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်သင်ထံမှစက်ပစ္စည်းများကိုပေးအပ်လျှင်) သင့်အနေဖြင့်၎င်းအချက်အလက်များကိုတရားဝင်အချက်အလက်များအနက်မှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ထုတ်ဖော်ရန်သင့်အတွက်တရား ၀ င်သေချာစေရမည် အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်အထိခိုက်မခံသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားရရှိနိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်၊ လျောက်ပတ်စွာသက်ဆိုင်သည်cabဥပဒေတွင်ပါဝင်သည်မှာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်း သင့်အားအကြောင်းအရာများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်လည်ပတ်သောအခါကြော်ငြာနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုပြသခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်သင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊
ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ အမိန့်များကိုတုန့်ပြန်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ သူတို့အားန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး။
ဆက်သွယ်ရေး: မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း (အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ၊ လူမှုမီဒီယာ၊ စ။ )ost (သို့) လူကိုယ်တိုင်) ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်မှုများကိုသင့်အားအသုံးချမှုများနှင့်အညီသင့်အားပေးအပ်ရန်သေချာစေပါcabဥပဒေ။
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အိုင်တီလုပ်ငန်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အိုင်တီလုံခြုံရေးလည်ပတ်မှု၊ နှင့်အိုင်တီလုံခြုံရေးစာရင်းစစ်။
ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ နှင့်ဆက်စပ်ဥပဒေရေးရာတာဝန်ဝတ္တရားနှင့်အတူလိုက်နာမှု။
ဘဏ္managementာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု: အရောင်း; ဘဏ္ာရေး၊ ကော်ပိုရိတ်စာရင်းစစ်; နှင့်ရောင်းချသူစီမံခန့်ခွဲမှု။
စစ်တမ်းများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်သင်၏အမြင်ကိုရယူရန်အတွက်သင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - ရှိပြီးသား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်အောင်စီစဉ်ခြင်း၊ နှင့်န်ဆောင်မှုအသစ်များကိုဖန်တီး။
လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်: ငါတို့နှင့်အတူရာထူးများအတွက် applications များ၏အုပ်ချုပ်ရေး။
Voluntary ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ပြprovision္ဌာန်းချက်များမရှိခြင်း၏အကျိုးဆက်များ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ခြင်းသည် volun ဖြစ်သည်tary နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်နှင့်သင့်အပေါ်ထားရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာချုပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုကျေပွန်စေရန်အတွက်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးရန်တာဝန်မရှိပါ။ သို့သော်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးအပ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်သင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏စာချုပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအတွင်းရှိအခြားအဖွဲ့အစည်းများသို့ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပြန်နိုင်သည် DataNumenလျှောက်လွှာနှင့်အညီသင့်အတွက်သို့မဟုတ်တရားဝင်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များ (သင်အား ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များလည်ပတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်) အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စာချုပ်ပါ ၀ င်သောတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်cabဥပဒေ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်နိုင်သည်
စာရင်းကိုင်များ၊ စာရင်းစစ်များ၊ ရှေ့နေများနှင့်အခြားပြင်ပပညာရှင်အကြံပေးများအတွက် DataNumenလျှို့ဝှက်စာချုပ်သို့မဟုတ်တရားဝင်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုချည်နှောင်ခြင်း၊
တတိယပါတီပရိုဆက်ဆာများ (ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ရေကြောင်း / ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ နည်းပညာပေးသွင်းသူများ၊ ၀ ယ်သူကျေနပ်မှုစစ်တမ်းပံ့ပိုးသူများ၊ “ တိုက်ရိုက်စကားပြော” ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အစိုးရ၏ထုတ်ပြန်ထားသောတားမြစ်ထားသောစာရင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သောလိုက်နာမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် US Office for ဤလောကရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေး (Section Asset Control)၊
ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများကိုထူထောင်ရန်၊ ကျင့်သုံးရန်သို့မဟုတ်ခုခံကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်စေ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုရန်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာပါတီ၊
သက်ဆိုင်သည့်တတိယပါတီ ၀ ယ်သူ (များ)၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ (သို့မဟုတ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်ရပ်များအပါအ ၀ င်) သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအစုအဝေးအားကျွန်ုပ်တို့ရောင်းခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သော်လည်းလျှောက်ထားချက်နှင့်အညီသာဖြစ်သည်။cabဥပဒေ၊ နှင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည် third party အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုပါကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်း၏တတိယပါတီပံ့ပိုးသူအားဝေမျှနိုင်သည်။ ၄ င်း၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမပြုမီထိုတတိယပါတီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံရန်တတိယပါတီပရိုဆက်ဆာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပါကလျှောက်လွှာမှလိုအပ်သည့်အတိုင်းဒေတာအပြောင်းအလဲအတွက်သဘောတူညီချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်မည်cabထိုကဲ့သို့သော third-party ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူဥပဒေများပြ္ဌာန်းရန်အတွက် Processor သည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာရမည် - (၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရန်။ (၂) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်အစီအမံများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အတူတကွ appli အောက်မှာမဆိုအပိုဆောင်းလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူcabဥပဒေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို (ဥပမာအားဖြင့်စုစည်းထားသည့်ပုံစံဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်) အမည်ဝှက်ပြီးထိုအမည်မသိအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (တတိယပါတီစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပါအ ၀ င်) မျှဝေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောသဘာဝကြောင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အတွင်းသို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်နိုင်သည် DataNumen ဤပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ အထက်ပါပုဒ်မ (ဂ) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအုပ်စုလိုက်နှင့်တတိယပါတီများသို့။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တည်နေရာအချက်အလက်ကိုကွဲပြားသောဥပဒေများနှင့်ဒေတာကာကွယ်မှုလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကြောင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအီးယူထက်အချက်အလက်များအနိမ့်ကျသောစံနှုန်းများရှိသောအခြားနိုင်ငံများသို့ကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားနိုင်ငံများသို့ကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းသည့်အခါ Standard Contractual Clauses ကို အခြေခံ၍ EEA သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်မှယူအက်စ်သို့လွှဲပြောင်းခြင်း မှလွဲ၍ လိုအပ်သောနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအပိုင်း (M) တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စံကန်ထရိုက်စာချုပ်များ၏မိတ္တူများကိုသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမတော်တဆသို့မဟုတ်တရားမဝင်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်အခြားဥပဒေမဲ့သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပုံစံထုတ်ခြင်းများမှကာကွယ်ရန်သင့်လျော်သောနည်းပညာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပါပြီ။cabဥပဒေ။
ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို (၎င်းတို့လုပ်ဆောင်နေသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ) မည်သည့်အချက်အလက်များကိုမဆိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များ (သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်း) နှင့် ဆက်စပ်၍ သင့်လျော်စွာလိုအပ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကန့်သတ်ထားရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအဆင့်တိုင်းကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏ဆက်နွှယ်သောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည် (ဥပမာ၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်သင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာပို့စာရင်းတွင်တရား ၀ င်ပါ ၀ င်ပြီးစာရင်းသွင်းခြင်းမရှိသော) ဒါမှမဟုတ်
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသောတရား ၀ င်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီလိုအပ်သည်၊ ထိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တရားဝင်ခိုင်လုံသောအခြေခံရှိခြင်း (ဥပမာ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏အလုပ်ရှင်ထားရှိသည့်အမိန့်တွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်တွင်တရားဝင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိုစာချုပ်အရကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ်သောအချက်အလက်များ။
မဆိုသက်ဆိုင်သည်cabappli အောက်မှာ le န့်အသတ်ကာလcabဥပဒေ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတရား ၀ င်တောင်းဆိုမှုသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည့်ကာလအတွင်း) နှင့်
ထိုကဲ့သို့သောသက်တမ်းကုန်ပြီးနောက်နောက်နှစ် (၂) လကာလcable limitation period (ထို့ကြောင့် အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်အကန့်အသတ်ကာလကုန်ဆုံးသောအခါတိုင်ကြားချက်တစ်ခုကိုယူဆောင်လာပါကထိုပြောဆိုချက်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်သင့်တော်သောအချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည်)
သက်ဆိုင်ရာတရား ၀ င်တောင်းဆိုမှုများကိုယူဆောင်လာပါကထိုတောင်းဆိုမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ လိုအပ်သောထပ်ဆောင်းကာလအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားကန့်သတ်ထားမည်။ တရားဝင်ပြောဆိုချက်ကို, ဒါမှမဟုတ်လျှောက်ထားအောက်မှာမဆိုတာဝန်cabဥပဒေ။
အထက်ပါအချိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီအတိုင်းအတာအထိ, အထက်ကာလcabကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအပြီးအပိုင်ဖျက်ပစ်၊ ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူခြင်း (သို့) မိတ္တူများ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏သဘောသဘာဝ၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းခံပိုင်ခွင့်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သော (သို့) ထိန်းချုပ်ထားသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များတွင်မည်သည့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမဆိုပြင်ဆင်ရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သော (သို့) ထိန်းချုပ်သောသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော (သို့) ထိန်းချုပ်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြား Controller သို့အတိုင်းအတာအထိလွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသည်cable;
အပြောင်းအလဲနဲ့၏တရားဝင်မှုခွင့်ပြုချက်အပေါ်အခြေခံပြီးရှိရာအပြောင်းအလဲနဲ့, သင်၏ခွင့်ပြုချက်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ပိုင်ခွင့်; နှင့်
ဤအခွင့်အရေးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုအသုံးပြုရန်၊ သို့မဟုတ်ဤအခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်ဤပေါ်လစီ၏အခြားပြဌာန်းချက်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းတစ်ခုမေးရန်အတွက်အောက်ပါပုဒ်မ (M) တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမိန့်များအပေါ် အခြေခံ၍ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေပါကဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည်။ ဤပေါ်လစီနှင့်ဤပေါ်လစီအကြားကွဲလွဲမှုများရှိပါကဤပေါ်လစီသည်ဖြည့်စွက်ရမည်tary.
Cookie ဆိုသည်မှာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု (ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအ ၀ င်) သင်ကြည့်သောအခါသင်၏စက်ထဲ၌ထည့်ထားသောဖိုင်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စက်ကိရိယာ၊ သင်၏ဘရောင်ဇာနှင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့်ကြည့်ရှုသည့်အလေ့အထတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်အညီ cookie နည်းပညာဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် cookie ပေါ်လစီ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သည် သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ.
appli မှဘာသာရပ်cabသင်လျှောက်ထားနှင့်အညီအတိအလင်းခွင့်ပြုချက်ပေးပြီဘယ်မှာဥပဒေcabဥပဒေအရသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆင်တူသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်မှုများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ပို့နေပါကသင့်အားသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ တိုက်ရိုက်မေးလ် (သို့) အခြားဆက်သွယ်ရေးပုံစံများမှတစ်ဆင့်သင့်အားသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်သင့်ကိုစီမံနိုင်သည် မင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လာမည့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့်သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ရှိသည့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်အားကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့နိုင်သည်cabဥပဒေ။
သင်ပို့သောအီးမေးလ်သို့မဟုတ်သတင်းလွှာတိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သောစာရင်းဖျက်ခြင်း link ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအားဖြင့်သင်အချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာအီးမေးလ်စာရင်းသို့မဟုတ်သတင်းလွှာများမှပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ သင်စာပေးသွင်းပြီးပါကနောက်ထပ်အီးမေးလ်များကိုသင်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်တောင်းဆိုထားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လိုအပ်သောအတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်၍ ဆက်သွယ်နိူင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ဤပေါ်လစီရှိမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုမှတ်ချက်များ၊ မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများရှိပါကသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားပြissuesနာများရှိပါက DataNumen, ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
'Controller' ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်ကဲ့သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆောင်ရွက်သည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များစွာတွင် Controller သည်အသုံးချခြင်းနှင့်လိုက်နာရန်အဓိကတာဝန်ရှိသည်cabအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေများ။
'ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်' မည်သူမဆိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသောသတင်းအချက်အလက်ကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နမူနာများကိုအထက် (ခ) တွင်ဖော်ပြထားသည်။
'လုပ်ငန်းစဉ်'၊ 'ပြုပြင်ခြင်း' သို့မဟုတ် 'ဖြစ်စဉ်' စုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ တိုင်ပင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်, ကန့်သတ်, ဖျက်သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်း။
'ပရိုဆက်ဆာ' ဆိုလိုသည်မှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Controller ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူ (ထိန်းချုပ်သူမှ ၀ န်ထမ်းများ မှလွဲ၍) ကိုဆိုလိုသည်။
'၀ န်ဆောင်မှုများ' ပေးသောမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမဆိုဆိုလိုသည် DataNumen.
'ထိခိုက်လွယ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်' လူမျိုးရေး၊ လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေးအမြင်၊ ဘာသာရေးသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ လိင်ဘဝ၊ appli အောက်မှာအထိခိုက်မခံဖြစ်လိမ့်မည်cabဥပဒေ။